Mudaaharaad ka soconaya magaalada London
Waxaa maanta ka dhacaya magaalada London ee dalka Ingiriiska mudaaharaad ay ka qeybgalayaan dad u badan Soomaali iyo xubno kale oo ka xun sidii waxashnimada laheyd ee loogu gowracay dalka Sacuudiga dhalinyaro Soomaali ah 4tii bishan April sanadkan.
Mudaaharaadkan oo ay soo qabanqaabiyeen Soomaali isugu jirta Aqoonyahanno iyo ururo ka jira magaalada London iyo urur xagga diinta ah oo ka soo horjeeda dowladda Sacuudiga laakiin tirada wakiillada ka jooga ay tiradoodu tahay ilaa 7xbunood, dhinaca kale xubnaha maanta ka qeybgalaya banaanbaxa waxaa ka mid ah Cawaale Kullane, Maxamed Nuur Tarsan, Sega Ruushka, Cabdixayi, Maxamed Owliyo iyo xubno kale oo iyagu soo qabanqaabiyay mudaaharaadka maanta.
Hadaba weli wuu ka soconayaa mudaaharaadkan safaaradda Sucuudiga uu ku leeyahay magaalada London horteeda iyadoo halkaasi ay joogaan ilaalo ka socota Boliiska dalkan Britain.
Mudaaharaadkan oo biloowday 1dii duhurnimo ee saacadda London dhamaanna doona abaarihii 6da maqribnimo ayaa weli halkaasi ka socda, waxaana halkaasi dadka qudbado uga jeedinaya dadkii soo qabanqaabiyay mudaaharaadkan.
Dhinaca kale waxaa isna si xowli ah uga socda qabanqaabada mudaaharaad kale oo isna ka dhici doona isla goobtaas maalinta Isniinta ah ee soo socota bishuna tahay 18ka bishan.
Afhayeen u hadlay ayaa ii xaqiijiyay in mudaaharaadkan ay wadaan uu wax badan ka bedeli doono qaababka ay u dhaci jireen kuwii ka horreeyay, isla markaana ku eedeeyay in kuwa maanta banaanbaxaya ay taageero ka heleyaan dhinaco Diimeed iyo kuwo siyaasadeed oo ujeedadoodu tahay wax kale, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu cambaareyn dusha kaga tuuray laanta Afka-Soomaaliga isagoo ku eedeynaya in ay u dhaqmayaan madaxdeeda sidii idaacadaha hoggaamiye kooxeedyada ka jira Soomaaliya.
Freelance Somali Journalist